Ny solika fiaramanidina maharitra maharitra dia azo zahana amin'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny seranam-piaramanidina Cologne Bonn
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao Mafana Alemana » Ny solika fiaramanidina maharitra maharitra dia azo zahana amin'ny seranam-piaramanidina ao amin'ny seranam-piaramanidina Cologne Bonn
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao Mafana Eoropeana • Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao Mafana Alemana • Vaovao • tompon'andraikitra • teknolojia • Tourism • Dinika fizahan-tany • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Tsiambaratelo momba ny dia • Travel Wire News • Vaovao isan-karazany
Neste dia manangana famatsiana Neste MY Sustainable Aviation Fuel ao amin'ny seranam-piaramanidina Cologne Bonn.
Ny seranam-piaramanidina Cologne Bonn dia iray amin'ny seranam-piaramanidina alemana voalohany misy ny Neste MY Sustainable Aviation Fuel (SAF) ho an'ny kaompaniam-pitaterana rehetra.
Ny sidina voalohany nampidirina niaraka tamin'i Neste MY SAF dia sidina enta-mavesatra tamin'ny volana Jona izay tantanan'ny ASL Airlines amin'ny anaran'ny Amazon.
Ny fampiasana solika fiaramanidina maharitra dia dingana lehibe iray hafa mankany amin'ny tanjontsika maharitra amin'ny sidina CO2 tsy miandany.
Neste, mpamatsy solika fiaramanidina maharitra (SAF), dia nanangana famatsian-tsolika Neste MY Sustainable Aviation Fuel ao amin'ny Seranam-piaramanidina Cologne Bonn. Amin'izany dia manampy i Neste hamaly ny habetsaky ny tinady amin'ny mpitatitra entana sy ny mpanjifa orinasa ao amin'ny seranam-piaramanidina Cologne Bonn. Ny AFS, izay mpamatsy lehibe indrindra amin'ny serivisy fandefasana solika fiaramanidina any Alemana, dia manohana an'i Neste hanompo amin'ity tsena ity. Ny sidina voalohany nampidirina niaraka tamin'ny Neste MY SAF dia sidina enta-mavesatra tamin'ny volana Jona izay tantanan'ny ASL Airlines amin'ny anaran'ny Amazon.
Amin'ny maha-lohalaharana amin'ny faharetana, seranam-piaramanidina Alemanina i Cologne Bonn dia iray amin'ireo seranam-piaramanidina alemana voalohany misy ny Neste MY Sustainable Aviation Fuel (SAF) ho an'ny kaompaniam-pitaterana rehetra. Satria i Cologne dia foibe fitaterana entana lehibe any Alemana, ny fisian'ny SAF dia hanome ny mpandefa eran-tany fahafahana hampihena ny etona entona entona entona entin'ny entam-panahin'izy ireo. Ny mpanjifa voalohany nahazo tombony tamin'ity fotoana ity dia Amazon.
“Faly izahay fa afaka manolotra lasantsy fiaramanidina maharitra maharitra. Izahay dia efa mampiasa fanavaozana ara-teknika marobe ao amin'ny seranam-piara-manidina Cologne Bonn - manomboka amin'ny tontolon'ny masoandro sy ny haitao LED ka hatrany amin'ny serivisy fananganana vaovao ary fiara sy fitaovana hafa matanjaka amin'ny apron. Ny fampiasana ny fiaramanidina maharitra maharitra dia dingana iray hafa manatratra ny tanjontsika maharitra amin'ny sidina CO2 tsy miandany, "hoy ny fanazavan'i Johan Vanneste, filoha & CEO an'ny Flughafen Köln / Bonn GmbH.
"Na eo aza ny tontolon'ny asa sarotra, ny indostrian'ny seranam-piaramanidina, ary ny sehatry ny entana indrindra, dia mampiseho fanamafisana ny fampiasam-bola amin'ny solika fiaramanidina maharitra mba hanolorana solika karbaona ambany ho an'ny mpanjifany," hoy i Jonathan Wood, filoha lefitra Europe, Renewable Aviation ao Neste. "Faly izahay fa miarahaba ny seranam-piara-manidina Cologne Bonn amin'ny tambajotram-piaramanidina mitombo miaraka amin'ny fahafahan'ny SAF, ary manantena ny hisian'ny fandrosoana bebe kokoa amin'ny fampihenana ny entona entona entona mifandraika amin'ny fiaramanidina."